५ वर्षमा रू. ८ अर्बका जुत्ताचप्पल निर्यात - Arthapage
प्रकाशित मितिः २४ चैत्र २०७५, आईतवार ०७:३८ April 7, 2019
काठमाडौं । पछिल्ला ५ आर्थिक वर्ष (आव)मा नेपालबाट रू. ८ अर्ब ३० करोडका जुत्ताचप्पल निर्यात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार आव २०७०/७१ देखि आव २०७४/७५ सम्ममा उक्त परिमाणमा निर्यात भएको हो । आव २०७०/७१ मा रू. १ अर्ब ९३ करोड ८१ लाखको जुत्ताचप्पल निर्यात भएको थियो । आव २०७१/७२ मा उक्त आँकडा ४० करोडले बढेर रू. २ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख पुगेको थियो । त्यसयता भने क्रमशः निर्यात घटेको देखिन्छ ।
नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगले स्वदेशी बजारको ६२ प्रतिशत माग धानेको छ । विदेशबाट आयात हुने जुत्ताचप्पलको मुख्य अंश चीन र भारतको रहेको फुटवेयर म्यानुप्mयाक्चर्स एशोसिएशन अफ नेपालले बताएको छ । यूरोपेली र मध्यएशियाका मुलुकबाट पनि जुत्ताचप्पल आयात हुने गरेको छ ।
एशोसिएशनका अनुसार नेपाली उद्योगमा रू. २० अर्बभन्दा बढीको लगानी छ । सरकारले ‘एकीकृत व्यापार रणनीति’ (एनटीआईएस) को निर्यात सम्भावना रहेका नौओटा वस्तुको सूचीमा जुत्ताचप्पललाई पनि समावेश गरेको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले गुम्यो बजार
एशोसिएशनका अध्यक्ष रविकुमार श्रेष्ठका अनुसार आव २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले उद्योगका संरचनामा क्षति पुर्‍याउँदा नेपाली जुत्ताको निर्यात घट्न पुगेको हो । भूकम्पको ६ महीनापछि भारतले ८ महीनासम्म नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालबाट जुत्ता निर्यात हुन नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकमा भारत निर्यातको आँकडा मात्र समेटिएकाले निर्यात घट्दो अवस्थामा देखिएको एशोसिएशनको भनाइ छ । भारतबाहेक यूरोप, अमेरिका लगायत मुलुकमा वार्षिक करीब रू. ८० करोडको जुत्ताचप्पल निर्यात हुँदै आएको छ । भविष्यमा बंगलादेश, अफ्रिकी र खाडी मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको एशोसिएशनले बताएको छ ।
जुत्ताचप्पल निर्यातको सम्भावना देखेर सहुलियतपूर्ण वातावरण बनाउने काम भइरहेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले बताए । उनका अनुसार केन्द्रले जुत्ताचप्पल उत्पादकको क्षमता वृद्धिका लागि तालीम दिँदै आएको छ । निकट भविष्यमै उल्लेख्य परिमाणमा निर्यात बढ्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।
#आर्थिक अभियानबाट साभार#
प्रकाशित मितिः २४ चैत्र २०७५, आईतवार ०७:३८ |
Prevवन पैदावारको साधारणसभामा उद्योगी,व्यवसायी सम्मानित
Nextभार्गव विकास बैंकको साधारणसभा : मर्जर सम्बन्धि बिशेष प्रस्ताव पेश हुने